Understanding Newspaper Headlines (သတင်းစာခေါင်းစီးတွေကို နားလည်ခြင်း) - Myanmar Network
Understanding Newspaper Headlines (သတင်းစာခေါင်းစီးတွေကို နားလည်ခြင်း)
Posted by Soe Soe Win on April 4, 2013 at 12:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျောင်းသားအများစုဟာ သတင်းစာခေါင်းစီးတွေကို ဖတ်တဲ့အခါနားလည်ဖို့ရာ အခက်အခဲတွေ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေါင်းစီးတွေဟာများသောအားဖြင့် မပြည့်စုံတဲ့ဝါကျတွေ(Incomplete sentences) ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဥပမာ-Difficult Times Ahead (ရှေ့ခက်ခဲအချိန်များ)
ဒီသတင်းစာခေါင်းစီးတွေထဲကမှ အများအားဖြင့် မြင်တွေရတဲ့ထူးခြားတဲ့ ခေါင်းစီးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Noun Phrases (နာမ်စကားစုများ)
ခေါင်းစီးတွေမှာ ကြိယာမဲ့နာမ်စကားစုများ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ Noun phrases တွေကတော့ နာမ်ကို အထူးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ [ဥပမာ-around strange, exotic people(ထူးဆန်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့လူတွေ အနီးအနား)]၊ အောက်တွင် Noun phrase များဖြင့် ရေးသား ထားသော ခေါင်းစီးအချို့ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
Under Pressure from Boss (အကြီးအကဲထံမှ ဖိအား)
Unexpected Visit (မမျှော်လင့်သော အလည်အပတ်)
Overwhelming Response of Voters (မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အားကောင်းသော တုံ့ပြန်မှု)
ဒီလိုခေါင်းစီးတွေကို ဖတ်တဲ့အခါ "From what?" (ဘာကလဲ?)၊ About what? (ဘာအကြောင်းလဲ?)၊ From whom? (ဘယ်သူ့ထံကလဲ?)၊ To whom? (ဘယ်သူ့ဆီလဲ?)၊ အစရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကို သင့်ကိုယ် သင်ပြန် မေးကြည့်တာဟာ အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမေခွန်းတွေမေးတာဟာ သင်ဖတ်ရမဲ့ ဆောင်းပါးက ဘာအကြောင်းဖြစ်နိုင်မလဲ ဆိုတာသိရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ ခေါင်း စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို ဦးဏှောက်ကိုစပြီး စဉ်းစားခိုင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပမာလေးကို ကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်နိုင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့
From whom? (ဘယ်သူကလာလည်တာလဲ)
Why was the visit unexpected? (ဒီအလည်အပတ်ကို ဘာကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတာလဲ?)
Who was visited? (ဘယ်သူ့ဆီကို လာလည်တာလဲ?) အစရှိတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမေးခွန်းတွေ မေးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ဆက်နွယ်မှုများ (relationships)၊ ခရီးသွားခြင်း (travelling) အံ့သြမှုများ (surprises)၊ လည်ပတ်ရခြင်းရဲ့ အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းများ (Important reasons for visits) အစရှိတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို အာရုံစိုက်ခိုင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Noun strings (နာမ်တွဲများ)
တချို့သော ခေါင်းစည်းတွေကို နာမ်သုံးလုံး၊ လေးလုံး ဒါမှမဟုတ်ရင် အဲဒီထက်ပိုသော နာမ်များကို တွဲ ၍ ဖော်ပြတတ်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ-Country Leader Question Time (နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မေးခွန်းအချိန်)၊ အဲဒီလို ခေါင်းစည်းတွေကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ နားလည်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တွဲထားတဲ့နာမ်တွေကြား ဆက်သွယ်မှုကို ဖော်ပြမဲ့ ကြိယာတို့ နာမ၀ိသေသနတို့ မပါလို့ပါပဲ။ နောက်ထပ်ဥပမာများ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Widow Pension Pay Committee (မုဆိုးမပင်စင် လစာကော်မတီ)
Landscaping Company Disturbance Regulations (ဥယျာဉ်ပန်းခြံပြုပြင်ရေး ကုမ္ပဏီနှောက်ယှက်မှု စည်းမျဉ်း)
Mustang Referral Customer Complaint (မတ်(စ)တင်း လွှဲပြောင်းမှု ဈေးဝယ်သူ တိုင်တန်းချက်)
နာမ်တွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်တော့ စာလုံးတွေကို ပြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်ခြင်းသည် အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်စပ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ခေါင်းစီးတွေထဲက တစ်ခု ကို ဥပမာအနေနဲ့ ကြည့်ကြည့်ပါ။
Musstang Referral Customer Complaint ပြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မှန်းဆလို့ရလာတာကတော့-:
There isacomplaint made byacustomer aboutareferral program for Mustang cars. (ဈေးဝယ်သူ တစ်ဦးက မတ်(ခ)တင်းကားတွေအတွက် လွှဲပြောင်းမှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တိုင်တန်းမှုရှိနေပါတယ်။) အမှန်တကယ်တော့လည်း ဒီလိုမြင်နိုင်ဖို့ကလည်း သင်ရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်ကိုတော့ အသုံးပြုရမှာပေါ့။
Various Verb Changes (ကြိယာပြောင်းလဲမှု အမျိုးမျိုး)
သတင်းစာခေါင်းစီးတွေမှာ ကြိယာကို အမျိုးမျိုးပြောင်းပစ်တတ်ပါတယ်။ အပြောင်းများတဲ့ ကြိယာပုံစံ အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
1. Simple tenses used instead of continuous or perfect forms. ဖြစ်ဆဲကာလများ (Continuous tenses)) နှင့်ဖြစ်ပြီး ကာလ (Perfect tenses)များအစား ရိုးရိုးကာလများ (Simple Tense) ကို အသုံးပြုခြင်း
Forgotten brother appears (မေ့ပျောက်အကိုပေါ်လာပြီ။)
အဓိပ္ပာယ်ကတော့- A forgotten brother has appeared (afteralong period of time). [မေ့ပျောက်နေခဲ့တဲ့ အကို (အချိန် အကြာကြီးနေမှ) ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီ။]
Professors Protest Pay Cuts (ပါမောက္ခများ ကန့်ကွက်လစာဖြတ်မှု)
အဓိပ္ပာယ်ကတော့-Professors are protesting pay cuts. (at the university). [(တက္ကသိုလ်မှာ) ပါမောက္ခတွေက လစာဖြတ်တာ ကို ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။]
2. The infinitive form refers to the future (ကြိယာ၏ အခြေခံပုံစံ (Infinitive) က အနာဂတ်ကာလကို ရည်ညွန်း ခြင်း)
Mayor to open shopping mall. (မြို့တော်ဝန်ဈေးဝယ်စင်တာဖွင့်မည်။)
အဓိပ္ပာယ်မှာ-The Mayor is going to openanew shopping mall. (မြို့တော်ဝန်က ဈေးဝယ်စင်တာအသစ်ကို ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
James Wood to Visit Portland. (ဂျိမ်း(စ)၀ူး(ဒ)ပေါ့(တ)လင်သို့ အလည်သွားမည်။)
အဓိပ္ပာယ်=(Famous Actor) James Wood is going to visit-Portland soon.[(နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်)ဂျိမ်း(စ)၀ူး(ဒ)သည်မကြာမီပေါ့(တ)လင်သို့အလည်အပတ်သွားမည်။]
3. Auxiliary verbs are dropped in the passive form (ပြုခြင်းခံပြ ကြိယာပုံစံတွင် အကူကြိယာများကို ချန်ခဲ့ခြင်း)
Man killed in Accident (မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွင် လူသေဆုံး)
အဓိပ္ပာယ်-A Man has been killed in an accident. (မတော်မဆတိုက်ခိုင်မှုတစ်ခုတွင် လူတစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ သည်။)
Tommy the Dog Named Hero. (ခွေးတော်မီ လူစွမ်းကောင်းအမည်တပ်)
အဓိပ္ပာယ်=Tommy the dog has been namedahero (by the Mayor). [(မြို့တော်ဝန်က)တော်မီဆိုတဲ့ ခွေးက လေးကို လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။)]
4. Drop Articles (နာမ်ညွှန်းပစ္စည်းများ ချန်ခဲ့ခြင်း)
ရှေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ဥပမာတွေမှာ ယေဘူယျနာမ်ညွှန်းပစ္စည်းတွေ (indefinite articles) ရောတိကျ သေချာတဲ့ နာမ်ညွှန်းပစ္စည်းတွေ (definite articles)ပါချန်ခဲ့တာကို သတိထားမိခဲ့မှာပါ။ (ဥပမာ-Mayor to choose Candidate).
President Declares Celebration (သမ္မတအခမ်းတစ်ခုကို အနားကြေညာခဲ့သည်။)
အဓိပ္ပာယ်=The President has declaredacelebration. (သမ္မတက အခမ်းအနားကြေညာခဲ့သည်)
Passerby sees Woman Jump (အမျိုးသ္မီးခုန်ချ ဖြတ်သွားသူမြင်)
အဓိပ္ပာယ်=A passerby has seenawoman jump into the river. [(မြစ်ထဲသို့) အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခုန်ချ တာကို ဖြတ်သွားသူတစ်ဦးကမြင်လိုက်သည်။)]
Permalink Reply by Pyae Sone Minn on April 4, 2013 at 15:36
I hope people can keep on making post to help us get our english better.
Sincerely thankful to those who had posted and also the owner of this post as well.
Permalink Reply by Khine ThinZa Soe on April 4, 2013 at 22:16
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on April 5, 2013 at 15:40
Permalink Reply by waiwaikhaingoo on April 8, 2013 at 9:16
Permalink Reply by may thandar soe on April 9, 2013 at 11:55
Permalink Reply by Thar Htoo Zaw on April 14, 2013 at 17:19
Permalink Reply by Alin Thu on April 17, 2013 at 19:55
Permalink Reply by May Khine Htoon on April 28, 2013 at 16:43
Thank you, when I read articles, I've never noticed about the facts that you explained us. It is really helpful for me. Thank you again.
Permalink Reply by venus on August 3, 2013 at 15:58
Thanks Sir ^-^
Permalink Reply by mayzinthin on January 31, 2014 at 13:27
Permalink Reply by myo min on August 21, 2014 at 21:51
Permalink Reply by htaylim on December 18, 2015 at 19:55